Ulwazi oluneenkcukacha malunga neempazamo ze-CHECKDB "Ngexesha lokuphinda kwenziwe umsebenzi ongene kwindawo yedatha 'i-xxxx', kwenzeke impazamo kwi-ID yokurekhoda."
Ikhaya iimveliso DataNumen SQL Recovery Impazamo ye-CHECKDB: Ngexesha lokuphinda usebenze kwakhona ukungena kwiDatabase 'xxxx', Impazamo eyenzeke kwi-Id Record Record
Ulwazi oluneenkcukacha malunga neMpazamo ye-CheckDB "Ngexesha lokuphinda kwenziwe uMsebenzi oVulekileyo kwindawo yogcino lwedatha 'xxxx', Impazamo yenzekile kwiLog Record Id."
Nksg 824, iNqanaba 24, i-State 2, i-Line 2
SQL Server Ndifumene impazamo ye-I / O esekwe kulungelelwaniso olusebenzayo: iphepha elingachanekanga (kulindeleke 1: 143; eyona nto iyi-0: 9). Kwenzekile ngexesha lokufundwa kwephepha (1: 143) kwindawo yesazisi ID 39 kwi-offset 0x0000000011e000 kwifayile 'C: Iifayile zeNkqubo SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Imiyalezo eyongezelelweyo kwifayile ye- SQL Server ilog yempazamo okanye inkqubo yomcimbi wokungena inokubonelela ngeenkcukacha ezithe kratya. Le yimeko yeempazamo enkulu esongela isiseko sedatha kwaye kufuneka ilungiswe kwangoko. Gcwalisa isiseko esigcweleyo sokungqinisisa (DBCC CHECKDB). Impazamo inokubangelwa zizinto ezininzi; ngolwazi oluthe kratya, bona SQL Server Iincwadi ezikwi-Intanethi.
Nksg 3313, iNqanaba 21, i-State 1, i-Line 2
Ngexesha lokuphinda kwenziwe umsebenzi ongene kwindawo yogcino lwedatha 'Impazamo1', kwenzeke impazamo kwi-ID yokurekhoda irekhodi (135: 752: 2). Ngokwesiqhelo, ukusilela okuthile bekungenwe ngaphambili njengempazamo kwinkonzo yeWindows Log Log. Buyisela isiseko sedatha kugcino olupheleleyo, okanye ulungise isiseko sedatha.
SQL Server Ndifumene impazamo ye-I / O esekwe kulungelelwaniso olusebenzayo: iphepha elingachanekanga (elindelweyo 1: 160; eyi-0: 41). Kwenzekile ngexesha lokufundwa kwephepha (1: 160) kwindawo yesazisi ID 39 kwi-offset 0x00000000140000 kwifayile 'C: Inkqubo yeefayile SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Imiyalezo eyongezelelweyo kwifayile ye- SQL Server ilog yempazamo okanye inkqubo yomcimbi wokungena inokubonelela ngeenkcukacha ezithe kratya. Le yimeko yeempazamo enkulu esongela isiseko sedatha kwaye kufuneka ilungiswe kwangoko. Gcwalisa isiseko esigcweleyo sokungqinisisa (DBCC CHECKDB). Impazamo inokubangelwa zizinto ezininzi; ngolwazi oluthe kratya, bona SQL Server Iincwadi ezikwi-Intanethi.
Nksg 824, iNqanaba 24, i-State 2, i-Line 4
UMsg 3313 ibonisa ukusebenza kwelog kungenakwenziwa.
Xa i-CHECKDB ingenakho ukusebenza ngokungena, iya kuxela umyalezo wemposiso UMsg 3313 kwaye uzame ukulungisa iimpazamo. Ukuba ayinakulungisa impazamo, ukubuyisela kwakhona kuyasilela kwaye kuya kukhokelela kwiimpazamo ezininzi, ezinje nge UMsg 3414 kunye noMsg 824.
Isampulu iifayile ze-MDF ezonakeleyo eziza kubangela UMsg 3313 imposiso:
SQL Server 2014 Impazamo9.mdf Impazamo9_fixed.mdf